‘हाम्रो प्रतियोगिता अलि फरक छ’ « Loktantrapost
‘हाम्रो प्रतियोगिता अलि फरक छ’
४ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ०४:२२
यही जेठ ५ गते विर्तामोडमा ‘ग्लोवल मेनेजमेन्ट मिस एसएलसी–२०१६’ प्रतियोगिताको ग्रान्ड फिनाले आयोजना हुँदैछ । प्रतियोगितामा भर्खरै एसएलसी दिएका ३० जना किशोरी सहभागी छन् । प्रतियोगिताको सेरोफेरोमा आयोजक ड्रिम्स वल्र्डस् इन्टरटेन्मेन्टका मेनेजिङ डाइरेक्टर प्रनित पुडासैनीसँग लोकतन्त्र पोस्टले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ–
‘मिस एसएलसी’ तयारी कहाँ पुग्यो ?
तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यहि जेठ ५ गते बिर्तामोडको अतिथि सदनमा ग्रान्ड फिनाले हुँदैछ । सहभागीलाई आयोजकले सिकाउने जति हामीले सिकाई सकेका छौँ । बाँकी तयारीमा उनीहरू पनि लागेका छन् । हाल स्टेज मेन्टेनेसदेखि, कसरी कार्यक्रमलाई भव्य बनाउने भनेर त्यो तयारीमा जोडतोडका साथ लागेका छौँ ।
यो ‘ट्यालेन्ट शो’ हो कि ‘व्यूटी शो’ ?
यो सौन्दर्यलाई आधार मानेर आयोजना गरिएको ‘ट्यालेन्ट शो’नै हो । हामी बाहिरी सौन्दर्य भन्दा पनि उसको भित्री ज्ञान र विवेकलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ । सहभागीहरूलाई समाजप्रति जिम्मेवार बनाउने मुख्य काम हाम्रो हो । त्यसको लागि ‘ट्यालेन्ट’ त हुनै पर्यो नि ।
नेपालमा मोडलिङ बारे नकारात्मक सोच ज्यादा पाइन्छ । तपाइँको धारणा ?
नेपालमा मात्रै होइन विश्वव्यापी रुपमा नै नकारात्मक सोच हावी छ । विशेष त मानिसको सोचाइमा भर पर्ने कुरा पनि हो । केही हदसम्म बिकृति हुने किसिमका कामहरू पनि भएका छन् । तर पछिल्लो समय यो क्षेत्रलाई हेर्ने नजरियामा परिर्वतन हँुदै आएको पाउँछु । पहिले पहिले अभिभावकलाई आफ्ना छोरीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनका लागि निकै कन्भिन्स गर्नु पथ्र्यो तर अचेल त्यति गाह्रो छैन । उनीहरू आफै बुझ्न आउँछन् । र, केही हदसम्म धारणा परिर्वतन भइरहेको छ ।
‘मिस एसएलसी’का सहभागीले के कस्तो तालिम पाएका छन् ?
उनीहरूलाई २० दिन बन्द सत्रमा राखियो । भर्खर परीक्षा दिएका विद्यार्थी भएकाले उनीहरूमा सुरुवातमा बाहिरी ज्ञान कम थियो । अहिले उनीहरू समाजमा नेतृत्व गर्न सक्ने भएका छन् । सँगै व्यक्तित्व विकाससँगै मोडलिङ फिल्ड भएकाले अभिनय, क्याट वाक, नृत्य, सङ्गीत र भविष्यमा के विषय लिएर पढ्ने भन्ने र आफै निर्णय गर्न सक्ने क्षमताका कक्षाहरू हामीले दिएका छौँ ।
किन तपाई सञ्चारकर्मी छँदाछँदै मोडलिङ प्रतियोगिताको आयोजनामा लाग्नु भयो ?
सञ्चार क्षेत्रसँगै मेल खाने बिषय जस्तो लाग्छ मलाई यो मोडलिङ क्षेत्र पनि । मोडलिङ सञ्चार बिना अपूरो नै छ । दुवै फिल्डमा काम गर्दा धेरै सजिलो त हँुदोरहेछ नै । सञ्चार क्षेत्रबाट धेरै सिकिन्छ र त्यो सिकेको कुरालाई मोडलिङमा प्रयोग गर्दा कार्यक्रमहरु राम्रो हँुदै गएका छन् ।
सञ्चार क्षेत्र भन्दा यता अलि रिफ्रेसनेस पनि हुन्छ ।
ग्रान्ड फिनालेलाई भव्य बनाउने कस्तो योजना छ ?
पक्कै पनि यस अघिको ‘मिस टिन झापा’ जस्तौ ‘मिस एसएलसी झापा’लाई भव्य बनाउने भनेर नै लागेका छौँ । यसपटक चलचित्र क्षेत्रमा छाउनु भएका नायिका रिचा शर्मा, गायक सुगम पोखरेल र राष्ट्रि«य स्तरका सञ्चारकर्मी राधाकृष्ण धितालले कार्यक्रमको निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरू आउँदा कसो कार्यक्रम भव्य नहोला । सँगै यो सबै कार्यक्रमको कोरियोग्राफी यसपटक मैलै आफै गरेको छु । हुन त चुनौती पनि छ र पक्कै पनि मेरो मेहेनतले काम राम्रै गर्छ भन्ने विश्वास छ ।
प्रतियोगिता निष्पक्ष हुनेछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
अरु प्रतियोगिता भन्दा हाम्रो अलि फरक छ । हामी सबै निर्णय अन्तिम फिनालेको दिननै गर्छौँ । त्योभन्दा अघि सबैलाई बराबर सिकाउने हो । फिनालेको दिन प्रतिस्पर्धीहरूलाई जजले दिनु भएको अङ्क हामी स्टेजमानै सबैको सार्वजनिक गरिदिन्छौ । फेरि यसपटक सबै मोडलिङ फिल्डकै मानिसहरूले जज गर्ने हुँदा निष्पक्ष हुन्छ भन्ने दाबी गर्न चाहन्छु ।
‘मिस एसएलसी’ लगत्तै हामी ‘मिस मेची’को तयारीमा छौँ । जसको पहिलो छनौट प्रक्रिया सकिएको छ । हामी त्यो प्रतियोगितामा मेची अञ्चलभरिका ३० जना किशोरीलाई सहभागी गराउने छौँ । हालसम्मका सम्पूर्ण कार्यक्रम भन्दा स्तरीय र ग्रान्ड बनाउने तयारीमा छौँ मेचीलाई पनि । आवेदन खुल्ला भएकाले भर्न इच्छुकलाई अनुरोध पनि गर्छु ।